Previous Article E Guzobe Anyachebelu Dịka Onye Jigodi Ọkwa Ọkaikpe Ukwu Steeti Anambra
Next Article A Kpọkuola Ndị Aka Ji Akụ Ka Ha Na-Echeta Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ
Mmemme inye na ịnata akwụkwọ ndọrọ ego a bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ezumeezu Ndịowu, ma bụrụkwa nke ụmụafọ obodo ahụ sònyèrè na ya.
N'okwu ya oge ọ na-enyefe ya bụ akwkwọ ndọrọ ego n'aka onyeisi nlekọ òtù ọrụ ahụ na ya bụ obodo, bụ Maazị Emezie Nwangene; onyeisi ASCSDA na steeti Anambra, bụ Maazị Chudị Mọjekwu mere ka a mara na isi sekpụ ntị n'atụmatụ ọrụ ahụ bụ ime ka e nwee ezi ọnọdụ mmepe tọrọ àrọ n'ime-ime obodo dị iche iche na steeti ahụ, bụ nke so n'otu ihe na-echu ọchịchị Willie Obianọ ụra.
Dịka ọ na-akọwa na ego ahụ ka bụgodi pasentị iri atọ nke mbụ n'ime mkpokọta ego a ga-eji wee rụọ ya bụ ọrụ, o mere ka ndị obodo ahụ mara na ha kètara ntụnye narị Naịra ise na ya bụ ọrụ, bụ nke o kwuru na ha nwere ike itinye n'ụdị ego ma ọ bụ n'ụdị ihe e ji arụ ọrụ, ma kpọkuzie ha ka ha were ọrụ ahụ kpọrọ ihe, rụchàpụ ya n'oge a tụrụ anya ma tinyekwa akwụkwọ maka ego ịbagide n'amụma ọrụ nke abụọ.
Na nzaghachi oge ọ natachara ya bụ akwụkwọ ndọrọ ego, Maazị Nwangene fọrọ ekele n'ụkpa wee bunye ndị òtù ọrụ ASCSDA, ọchịchị gọvanọ Obianọ na ụlọ ọba ego mba ụwa maka ya bụ ọmarịcha atụmatụ ọrụ n'obodo ahụ, ma kwekwazie nkwà na ha ga-arụ ọrụ ahụ nke ọma nakwa otu o siri kwesi, iji mezupùta ebumnobi e jiri guzobe ya bụ atụmatụ.
Na ntụnye nke ya, onyeisi ọchịchị obodo Ndịowu, bụ Maazị Abednego Okoli kọwara atụmatụ ọrụ ahụ dịka nke magburu onwe ya, ma kwe nkwa na ha ga-eji ego ahụ wee rụọ ihe e mebèère ya ma rụọ ya otu o siri kwesi.